Nokia dia manambara ny hetsika hataony amin'ny 23 Febroary ao amin'ny MWC 2020 | Androidsis
Nokia dia nanambara ny hetsika ho an'ny 23 Febroary ao amin'ny MWC 2020
daniplay | | About us
HMD Global toy ny Motorola ihany na TCL hanao hetsika alohan'ny hanombohana ny Mobile World Congress 2020 any Barcelona. Ny orinasa ao aoriany Nokia dia mandefa fanasana amin'ny 23 Febroary amin'ny 16 ora sy sasany hariva, izay hanehoany ireo telefaona fototra sy antonony manaraka ary ny sainam-pirenena sasany toa ny mety ho Nokia 8.2.
Ny orinasa dia tsy milaza na inona na inona mifandraika amin'ny afisy, na dia ny fivoahana farany farany aza dia manambara fa ho avy "kely taty aoriana" ilay fitaovana avo lenta. Ny Finnish koa dia mikendry ny hampiseho ny vavahady voalohany misy fakan-tsary voalohany manerantany eo ambanin'ny efijery, na dia milaza aza ny mpamokatra hafa fa tsy dia azo atao izany amin'izao fotoana izao.
Ny HMD Global amin'ity taona ity dia te-hampiorina ny tenany rehefa avy ao ambadiky ny mpanamboatra izay mandroso modely isan-karazany sy miasa isan-telovolana. Ho an'ity dia efa miasa hatramin'ny dimy na enina safidy hafa izy ireo izay hiseho mandritra ny enim-bolana amin'ity taona ity.
1 Nokia 1.3 sy Nokia 5.2
2 Nokia 8.2
Nokia 1.3 sy Nokia 5.2
Ireo finday roa finday dia mikendry ny haseho manomboka ny fanombohan'ny Pre-MWC, ny Nokia 5.2 antsipiriany ampy dia fantatra alohan'ny aseho. Anisan'izany ny efijery LCD misy 6.2-inch, RAM 3 / 4GB, fitehirizana 32 / 64GB, processeur Snapdragon 632 ary fakan-tsary roa aoriana. Manondro hatramin'ny 169 € ny vidiny.
Ny Nokia 1.3 no fototry ny fianakaviana, hanana efijery LCD 6-inch, MediaTek CPU, RAM 1 GB, fitehirizana 8 GB ary Android 10 Go Edition. Ny vidin'ity dia tsy hahatratra ny taona 80 ary safidy ho an'ireo izay mila izany amin'ny asa fototra.
Ny maodely 8.2 no ho voalohany tonga puce 5G ampidirina rehefa tonga miaraka amin'ny Soc Snapdragon 765, ity dia manome ny modem Snapdragon X52. Izy io dia hamatsiana RAM 8 Gigabytes total ary fitehirizana 128 GB, ny vidin'ity telefaona ity dia amidy 500 latsaka fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Nokia dia nanambara ny hetsika ho an'ny 23 Febroary ao amin'ny MWC 2020
Lehiben'ny mpanatanteraka Nubian dia mampiseho telefaona misy famerenam-bola haingana 80W